I-stylish futhi efanele: izizathu ezintathu zokukhetha imikhiqizo yobuhle MAC x Min Liu
Ukuqoqwa okulinganiselwe kwe-MAC x Min Liu akulula ukuthola - ama-fashionistas avela kumazwe e-CIS kuzodingeka awuthathe kuwebhusayithi ye-brand, esebenzisana ngaphambili ngalesi sikhundla nabaningi beza. Ingabe i-beauty-innovative imizamo enjalo iyadingeka? Ngokungangabazeki, yebo, futhi lawa akuwona amagama angenalutho.
Isithombe se-Promo se-line "enkulu" yama-MAC
Ukuphikisana kokuqala yi-powder okukhethekile yePearlmatte Face Powder. Kulokho konke kulungile: kokubili ukuklama kwe-laconic yephakheji, nokuthungwa okubucayi kunabo bonke, kanye nephethini le-3D elimangalisa elifana namafu ngesikhathi selanga. Kodwa okubaluleke nakakhulu, ukuphumelela komkhiqizo - i-powder siqukethe izingulube ezintathu ze-satin: i-coral ebomvu, ebomvu pink kanye ne-pearl beige. Ukuxuba ama-shades, ungathola kalula umbala wendawo yonke okulungile kwesikhumba sakho sesikhumba futhi uyisebenzise njengobungqingili, i-highlighter, izithunzi nombala we-lip.
Umkhiqizo wezinkanyezi MAC x Min Liu - Powder Pearlmatte Face Powder
Ukuphikisana kwesibili kuyinkathalo yezinyosi uNksz Min. I-lipsticks emibili yamanzi namanzi amabili okukhanya okucwebezelayo-okuyi-hit ekahle esimweni sehlobo-ngo-2017. I-salmon ebomvu ebomvu ne-pink iyi-duo enhle kakhulu yokwenza izikhumbuzo ezingakhohlwayo. I-aesthetics ibuye ibaluleke: ukukhanya kanye nezindebe zomlomo zifakwe emahlathini amnyama ase-lacquer futhi zihlotshiswe ngamabhulashi e-coquettish.
I-Lipstick-tint futhi ukhanyise uNksz: ukuthinta okuphumelelayo kokwenza okwesifazane
Ukuphikisana ngamathuluzi wesithathu Brush Roll Ms Min. Uma usenaso isethi yobuchwepheshe kanye neyonke jikelele yezibhamu - yisikhathi sokuzithola. I-Brush Roll Trio yilokho okudingayo esikhwameni sezimonyo: ibhulashi elikhulu eliyindilinga lamabhantshi we-tonal kanye ne-blush, enwetshiwe ukuze kube lula nokushayela izithunzi nezithunzi. Isembozo sendwangu ehlanganisiwe ivikela amathuluzi futhi ayithathi isikhala esiningi esikhwameni sokuhamba.
I-Seth Brush Roll Ms Min - yokwenza noma iyiphi inkimbinkimbi
Lokhu ukwenza okulula kuyangisiza ukuba ngishintshe izici zobuso
The stylish kunazo smokey-amehlo ebusika 2016-2017 (isithombe nge amathrendi)
Ukunquma izinwele nokuzenzela ubuso obuyindilinga
Ungayenza kanjani ubisi obuningi ukususa izimonyo?
Ishukela segorosi enhlobonhlobo
I-ayisikhili oyikhethayo ihambelana nobunikazi bakho
Ukuzivocavoca ukuze unciphise ukucindezeleka
Uphi umoya ovela emkhathini?
Ukukhetha okulungile kobheyi
Isimo sezintambo eziqinile
Indlela yokukhetha ijazi lesikhumba seminki: amathiphu awusizo
I-Horoscope: Isibikezelo se-scorpion yonyaka we-tiger
Utamatisi isobho nge inkukhu umhluzi
Umuntu wenzani emva kwehlukaniso?
Ukwenza umshado wama-blondes